Han Nyein Oo – Page2– Celebrity Gossip
Han Nyein Oo
Gen Z တွေ အတုယူသင်တဲ့ မြေနီကုန်းစမ်းချောင်းမှာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နည်းဗျူးဟာ
February 28, 2021 hannyeinoo 0
Gen Z တွေ အတုယူသင်တဲ့ မြေနီကုန်းစမ်းချောင်းမှာ အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ နည်းဗျူးဟာ ဒီနေ့ မြေနီကုန်း စမ်းချောင်း မြေပြင်အခြေအနေ ဒီနေ့ ကျနော် မြေနီကုန်း စမ်းချောင်းမှာ မနက်ကတည်းကရှိနေပါတယ်၊ အဓိကကတော့ ပဒုမ္မာလမ်းမှာပါ၊ သတင်းအမှားတွေကြားရမှာဆိုးလို့ အင်တာနက်မဖွင့်ပဲ အခု အိမ်ပြန်ရောက်မှ သတင်းတွေ လိုက်ဖတ်မိပါတယ်၊ ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ […]
ဖတ်ရင်း မျက်ရည် ပေါက်ပေါက်ကျ ပြီစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်..😭😭😭
ဖတ်ရင်း မျက်ရည် ပေါက်ပေါက်ကျ ပြီစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်..😭😭😭 . ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့တာမို့ မှတ်တမ်းတင်ပါရစေ ! ဒီနေ့လှည်းတန်းကနေ ပြေးလာတဲ့ကလေးတွေ သံလမ်းဘက်အထိ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဆုတ်ပြေးလာရတာပါတဲ့ ” “မင်းတို့မိဘတွေစိတ်ပူနေမယ် ဖုန်းဆက်လိုက်အုံး”လို့ ဟင့်အင်းမလိုဘူး ဦးလေး သားတို့မိဘတွေက တခါတည်းမှာပြီးလွှတ် လိုက္တာပါ ! အမေတို့ခေတ်ကနေ အခုထက်ထိ နှစ်ပေါင်း […]
ဆန္ဒပြကြသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ Defense တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဗားကရာလမ်းပေါ်က သင်ခန်းစာ !
February 27, 2021 hannyeinoo 0
ဆန္ဒပြကြသူတွေကို ကာကွယ်ဖို့ Defense တည်ဆောက်ခြင်း နှင့် ဗားကရာလမ်းပေါ်က သင်ခန်းစာ ! ဒီနေ့ ဗားကရာလမ်း ဆန္ဒပြပွဲမှာမနက်တစ်ပိုင်းလုံးကတော့ ဆန္ဒပြသူတွေ လုပ်ကြတာက လူစုပြီး အော်မယ်။ ရဲတွေ ပြေးတက်လာရင် ပြေးမယ်။ ရဲတွေ ငြိမ်သွားရင် လူပြန်စုမယ်။ ဆက်အော်မယ်။ ဒါကိုပဲ ထပ်ခါ ထပ်ခါ […]
မိန်းကလေးတွေ ဖတ်ပေးကြပါ အရေးကြုံရင် အသုံးဝင်ပါတယ်
မိန်းကလေးတွေ ဖတ်ပေးကြပါ အရေးကြုံရင် အသုံးဝင်ပါတယ် Self defense tip နည်းနည်းပေးပါ့မယ်။ ဒီနည်းတွေသုံးဖို့ အားကောင်းဖို့မလိုပါဘူး။ ——- 1. 🤜 လက်သီးနဲ့ မေးစေ့/ပါးကို မထိုးပါနဲ့။ လက်သီးမဆုပ်တတ်ရင် လက်ကျိုးတတ်ပါတယ်။ လက်ချောင်းကြားထဲ သော့ထည့်ဆုပ်တာမျိုးလည်း မလုပ်သင့်ပါဘူး။ 2. လက်ထဲက တခုခုကို ကိုင်မယ်ထုမယ်ဆို […]
Gen X ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်ကျက်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့ လုပ်ရပ်
Gen X ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ရင်ကျက်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချခဲ့တဲ့ ဦးဇင်ဝိုင်းရဲ့ လုပ်ရပ် မြန်မာပလာဇာမှာ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေနဲ့ ရဲတွေကြား အနုပညာရှင် ဦးဇင်ဝိုင်းက ဝင်ရောက်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ “အခုဆန္ဒပြနေတဲ့ လူငယ်တွေက အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက်မှမပါပါဘူး ဘာလက်နက်မှလဲ မပါပါဘူး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာပါရဲမှုးတို့ဘက်ကလဲ ဆောင်ရွက်ရမယ့် ဝတ္တရားရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ်”ဆိုပြီး မြန်မာပလာဇာမှာ လူငယ်တွေနဲ့ ရဲတွေကြား […]
အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြသွားတဲ့ မုံရွာလူထုကြီးရဲ့ ညီညွတ်မှု
အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲ အလုပ်နဲ့သက်သေပြသွားတဲ့ မုံရွာလူထုကြီးရဲ့ ညီညွတ်မှု လေမဟုတ် အလုပ်နဲ့ သက်သေပြတဲ့ မုံရွာဟ သာဝရ မုံရွာက ညီတယ် မုံရွာသားတွေက သွေးရဲတယ် ကရိန်းကားနဲ့ ဘောက်တွေချိတ် ယာယီစင်မြင့် ဆောက် လူအင်းအား သိန်းချီတော့ LED ဘုတ် နဲ့ ထိုးပြ လူထုညီလာခံ သိပ်သပ်ရပ်တယ်… […]
စာဖတ်သူအပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ခင်ဗျာ … ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ စကားပုံမှာ လူအကြောင်း ပေါင်းမှသိ ဆိုတဲ့ စကားပုံလေးကို အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ မိတ်ဆွေစစ် မိတ်ဆွေမှန် ဆိုတာကို ဒုက္ခဖြစ်ချိန်မှ သိရတယ်လို့လဲ ပြောကြသေးတယ်မို့လား ခင်ဗျာ … ဒါတွေကို ဘာလို့ ပြောနေတာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ […]
ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ခက်ခြင်းကို အကြီးအကျယ်ခံလိုက်ရတဲ့ အလှမယ်နှစ်ဦး
ပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ခက်ခြင်းကို အကြီးအကျယ်ခံလိုက်ရတဲ့ အလှမယ်နှစ်ဦး အသိပေးကြေညာချက် ယွန်းဝင့်လွှာအောင် ” Miss Now How 2017 နှင့် ” ရွှေရူပါဦး ” Miss Equal Myanmar 2019 တို့ ( ၂) ဦးအား Missosology နှင့် Missosology […]
အားလုံးမျက်ရည်စို့ခဲ့ရတဲ့ Gen Z ကလေးတွေနဲ့ Fee Ride လိုက်ပို့တဲ့ ကားသမားတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေး
February 26, 2021 hannyeinoo 0
အားလုံးမျက်ရည်စို့ခဲ့ရတဲ့ Gen Z ကလေးတွေနဲ့ Fee Ride လိုက်ပို့တဲ့ ကားသမားတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်လေး “လှည်းတန်း လူစုခွဲခံရတော့ မြောက်ဥက္ကလာနဲ့ ဒဂုံပြန်မဲ့ သူတွေအတွက် Free Ride လိုက်ပို့ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဖုံး ၃ယောက်နဲ့ အလည် နောက်ခန်း ၄ယောက် ရှေ့မှာ ပိန်တဲ့သူ၂ယောက်။ မြောက်ဥက္ကလာ အဝိုင်းကျ […]
MRTV နှင့် မြဝတီရုပ်မြင်သံကြား ကို ပြင်းထန်စွာ သတိပေးလိုက်တဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့စာ
စာဖတ်သူ အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ ခင်ဗျာ … သတင်းထူး တစ်ပုဒ်ပြောပြချင်ပါတယ် … ဒါကျတာ့ သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်ဟာ မြဝတီ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် MRTV တို့ကို ပြင်းထန်စွာ သတိပေးလိုက်တဲ့ သတင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် မြဝတီ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် MRTV မှာ မင်းမော်ကွန်း ပါဝင်သရုပ်တောင်ထားတဲ့ […]
Gen Z လေးတွေအတွက် မန်းလေးက သူဌေးကြီးတစ်ဦးရဲ့ လေးစားဖွယ် လုပ်ရပ်
ပြည်သူလူထုကြီးနဲ့အတူအခုအချိန်အထိ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဦးခင်လှိုင်ကြီး
ငါ့လက်ထဲ ကိုင်ထားတာ လေးဂွမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကရင်တပ်ဖွဲ့နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ( ရုပ်/သံ )
အောက်တန်းကျလွန်းတဲ့ ပိုစ့်ကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာပို့ချင်းခံနေရတဲ့ လှနုထွန်း